mairie-antananarivo – Boriboritany faha-3 (CUA): Manomanana fifaninanana tanàna madio
Ho fampandrosoana sy fanatsarana tanànan’ Antananarivo Renivohitra (CUA), Boriboritany fahatelo dia hisy ny tetik’asa izay hatomboka eny anivon’ny Fokontany, izay vatsian’ny mpiara- miombon’antoka vola sy fiarahamiasa miaraka amin’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana kaominina Antananarivo Renivohitra. Araka izany dia nisy fihaonana na fampiantsoana fivoriana ho an’ireo Sefo Fokontany miisa 34, ny RF2 ary ny REF, ny 09 oktobra tolakandro tetsy amin’ny Boriboritany fahatelo Antaninandro, izay notarihan’ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo, Razafitsalama Hery sy ireo tompon’andraikitra maro ao amin’ity boriboritany ity .
Ny votoatin’ny fivoriana dia fampahafantarana nataon’ny Delege azy ireon fa hahazo famatsiam-bola avy any amin’ny mpiara- miombon’antoka ny CUA, izay fiaraha-miasa miaraka eo amin’ny roa tonta ho entina hanatsarana ny Fokontany : toy ny “bassin lavoir, Epp, GEG, Lycée… ka mila fanatsarana na mila manao vaovao koa. Nambarany tamin’izy ireo fa mialohan’ny hanaovana ny tetik’asa dia hisy ny fifaninanana “tanàna Madio” isaky ny Fokontany tsirairay miaraka amin’ny Rf2 sy ny mponina, izay hanomboka ny 15 oktobra izao hatramin’ny 15 Febroary 2019. Ka ny Alatsinainy izao no tsy maintsy hanatitra ny fandaharanan’ asany ny isaky ny Fokontany tsirairay avy amin’ny asa fanadiovana izay hataony (daty , toerana, hetsika izay hatao), ao amin’ny Boriboritany fahatelo.
Marihana fa indray mandeha isam-bolana no hanaterana ny fandaharana asa fanadiovana ny Fokontany. Araka izany dia nametraka ny Delegen’ny boriboritany fa izay Fokontany mahazo ny laharana voalohany amin’io fifaninana “tanàna madio “ io no hanombohana ny tetik’asa izay nahazoana famatsiam-bola ary hahazo tombontsoa bebe kokoa mihoatra noho ny hafa, izay vao miitatra tsikelikely amin’ny Fokontany hafa arakaraka ny fahitana ny asa.
Noresahiny ihany koa:
- Ny mikasika ny RF2 Isaky ny Fokontany, ho an’izay maty dia velomina, ho an’izay marefo dia hatsangana.
-Mila manao tatitra any amin’ny Boriboritany koa ireo Fokontany manana olona eo amin’ny daba fanariana fako.
-Ny fampahafantarana azy ireo fa efa nisy fifanarahana teo amin’ny CUA sy ny SAMVA amin’ny fanadiovana tanàna.
- Mila fiaraha-miasa amin’ny Fokontany ihany ny CUA amin’ny ady amin’ny pesta.
-Ny fiaraha-miasa eo amin’ny Boriboritany sy ny Fokontany amin’ny resaka fandriampahalemana eny amin’ny elakelan-trano sy arabe .
-Fanamafisana amin’ny fifampizarana ny zava-misy eny anivon’ny Fokontany .
Nanaiky ny fandaminana izay napetraka ireo Sefo Fokontany, ny RF2 ary ny REF mba ho Fampandrosoana ny Tanàna sy fiaraha-miasa eo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.